स्थानीय तहदेखि नै अटो व्यवसाय बलियो बनाउन मेरो उम्मेदवारीः ध्रुव थापाको अन्तर्वार्ता
3:12 pm, बुधबार, साउन १३, २०७८
नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालले आगामी भदौ अन्तिमसाता आफ्नो चुनावी साधारण सभा गर्ने भएसँगै निर्वाचनको कार्यक्रममा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू जुटेका छन् । नेपालको राजश्व र रोजगारीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको अटोमोबाइल व्यवसायीको साझा संस्था भएकाले यसमा धेरै व्यवसायिक घरानाको चासो बढ्दै गएको छ । आगामी साधारण सभामा नाडाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा वर्तमान कार्यसमितिमा इलेक्ट्रीक भेहिकल कमिटिका सभापति ध्रुव थापा र वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष करण चौधरी अध्यक्ष पदमा चुनावा लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका थापासँग मेरोअटोले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
मेरो उम्मेदवारी स्वभाविक हो । लामो समयदेखि मोफसलमा रहेर मैले अटोमोबाइल व्यवसाय गर्दै आएको छु । अहिले देश संघीय संरचनामा गएको छ । त्यो संरचना अनुसार नाडाको पनि प्रदेश कमिटिहरू बनेका छन् । तर, उहाँहरूको पहुँचमा केन्द्रमा आफ्नो समस्या उठान गर्ने सक्ने अवस्था छैन । म विगत लामो समयदेखि मोफसल केन्द्र बनाएर व्यवसाय गर्दै आएको छु । सवारीसाधनको व्यवसाय कसरी गर्ने गराउने भन्ने विषयको नीति निर्माण केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बढी गर्न थालिसकेका छन् । त्यस्तोमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि जान पनि मेरो नेतृत्वलाई सहज हुने मैले देखेको छु ।
यति भनिरहँदा म चाहिँ यसअघि भएका काममा दोषी छैन भन्न खोजेको होइन । कार्यसमिति र पदाधिकारी भएर बस्दा त्यतिबेला भएका कमजोरीको भागिदार म पनि हुँ ।
स्थानीय तहमा लाग्ने कर, बैंकको ब्याज, व्यवसायको लागत बढ्ने अवस्था, कामदार लगायतका समस्या अहिले स्थानीय स्तरमा देखिएका छन् । अर्को विषय प्रदेश अनुसार सवारीसाधनमा लगाइएको कर पनि अटोमोबाइल व्यावसाय र पूर्ण राज्यको लागि नै चुनौती बन्दै जाने देख्दैछु । यी सबै विषयमा मेरो आफ्नै अनुभव, भोगाइ र सिकाइ छ । नाडामा पनि म उपाध्यक्ष यसअघि नै भइसकेको हुनाले सबै साथीहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने विश्वासको साथ मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ ।
पश्चिमाञ्चल डिलर एशोसिएसनमा १४ वर्ष बिताएको छु । त्यहाँ अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि म केन्द्रको नाडासँग जोडिएको हुँ ।
अहिले पनि नाडाको कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ । व्यवसायिक हक हितमा नीति निर्मातासँग लबिङ गर्न नाडा कत्तिको सफल छ जस्तो लाग्छ ?
विगतमा नाडाले आफ्ना कुरा सरोकारवाला निकायमा कडासँग राख्थ्यो र त्यो सुनुवाइ पनि हुँदै आएको थियो । पछिल्ला कार्यकालमा केही गुटगत प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ । त्यो बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो । नाडाले अनावश्यक विषयमा ‘एटेन्सन’ तान्ने नियतले मात्रै काम गर्न थाल्यौ कि भन्ने चिन्ता धेरै व्यवसायीमा भएको मैले पाएको छु । भदौ अन्तिममा साधारण सभा गर्ने विषय बाहिर आएसँगै मैले सबै पूर्वअध्यक्षदेखि व्यवसायीसँग भेटघाट गरेको छु । उहाँको चिन्ता पनि व्यवसायीको हितामा नाडा केन्द्रीत भएन भन्ने छ ।
यति भनिरहँदा म चाहिँ यसअघि भएका काममा दोषी छैन भन्न खोजेको होइन । कार्यसमिति र पदाधिकारी भएर बस्दा त्यतिबेला भएका कमजोरीको भागिदार म पनि हुँ । त्यसैले विगतबाट शिक्षा लिएर वर्तमानमा थप काम गर्ने योजना मैले निर्माण गरेको छु ।
प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रमा रहेका व्यवसायी र सरकार बीच तालमेल कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
हाम्रो व्यवसायको मोडल भनेकै स्थानीयबाट केन्द्रमा हो । तर, नाडा केन्द्रबाट स्थानीयको ट्रेन्डमा छ । यसमा सुधार गर्नु पर्छ । त्यो मैले एक्लै गर्न सक्ने र गर्ने विषय होइन, त्यसको लागि सबै व्यापारी साथीहरूको सहयोग र सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ । हाम्रा कति व्यापारी साथीहरू राम्रोसँग हिसाब राख्न नसकेर जरिवाना तिरिरहेका छन् भने कति स्थानीय तहका सरकारले मनोमानी तरिकाले कर निर्धारण गर्दा व्यवसाय नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
यदि तयारी साधन ल्याएर बेच्दाभन्दा यहाँ एसेम्बल गर्दा महंगो पर्छ भने त्यसमा कसले लगानी गर्छ । लगानी त प्रतिफल देखेपछि गर्ने हो नि । प्रतिफल आउन सक्ने आधार सरकारले तयार गर्नु पर्छ ।
केन्द्रमा धेरै डिष्ट्रिब्यूटर छन् । तर, प्रदेश स्तरमा रहेका डिष्ट्रिब्यूटरका आफ्नै किसिमका समस्या छन् । ती समस्याको निराकरण गर्न नाडाको प्रदेश कमिटि बलियो हुनुपर्छ । पहिला त त्यो पनि थिएन । वर्तमान अध्यक्ष ज्यूले सबै प्रदेशमा नाडा पुर्याउनु भएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । अब प्रदेशका साथीहरूलाई यहाँ ल्याएर नाडाको पदेन सदस्य बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, त्यही काम हुनुपर्छ । अर्को विषय यो क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्ति गर्नु पर्छ । त्यसको लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने देखेको छु ।
तपाईं आफैँले विद्युतीय बस नेपालमा नै एसेम्बल गर्छु भन्नु भएको थियो । अहिले अन्य कम्पनीहरू पनि नेपालमा साना प्यासेन्जर गाडी एसेम्बल गर्न खोजिरहेका छन् । नाडाबाट तपाईं कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधान एसेम्बल सुरु भएको छ । त्यसको तुलनामा ठूला सवारी साधन एसेम्बल यूनिट स्थापना गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ । यदि तयारी साधन ल्याएर बेच्दाभन्दा यहाँ एसेम्बल गर्दा महंगो पर्छ भने त्यसमा कसले लगानी गर्छ । लगानी त प्रतिफल देखेपछि गर्ने हो नि । प्रतिफल आउन सक्ने आधार सरकारले तयार गर्नु पर्छ । अहिले उद्योगको लागि आवश्यक जमिन किन्नै नसकिने अवस्था छ । हरेक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । त्यहाँ न्यूनतम भाडा तोकेर जमिन दिने हो भने त्यसले लगानी कम हुन्छ । सडक, बिजुली, पानी जस्ता उद्योगको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारमा व्यवसायीले लगानी गर्नु नपर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
निश्चित वर्ष नै तोकेर अन्तःशुल्क, भन्सार जस्ता करमा छुट दिने र केही वर्ष आयकरमा पनि निश्चित प्रतिशत छुट दिने हो भने उद्योग लाग्छ । यस्ता थुप्रै विषयमा योजना बनाएरै सरकारसँग लबिङ गर्ने सोच मैले बनाएको छु ।
अटोमोबाइल व्यवसायको विविधीकरण भइरहेको छ । व्यापार र व्यवसायको नेचर परिवर्तनसँगै नयाँ चुनौती पनि आइरहेका छन् । अध्ययन र अनुसन्धान गर्न विज्ञहरूको टिम निर्माण गरेर काम गर्ने मैले सोचेको छु ।
इलेक्ट्रीक ह्याचव्याक, क्रसओभर र एसयूभी मोडल ल्याउँदैछौं : यमुना श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता
आगामी दुई वर्षमा ग्रेटवालका ५ नयाँ मोडल नेपाल ल्याउँछौं : सुशिल गुप्ताको अन्तर्वार्ता
नीतिमात्रै बनेर भएन, कार्यान्वयनमा स्थिरता ल्याउन मेरो उम्मेदवारी : करण चौधरीको अन्तर्वार्ता